Ihe Ndị Na-enye Obi Ụtọ Si n’Inwe Ndidi na Ịnọgidesi Ike n’Ihe Pụta
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Ọgọst 1, 2003
GỤỌ NKE Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Ga Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Persian Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu
Ndị Nkwusa Alaeze Na-akọ
JIZỌS KRAỊST buru amụma na n’ụbọchị ikpeazụ “ịhụnanya nke ndị ka n’ọnụ ọgụgụ ga-ajụkwa oyi.” N’ihi ya, n’ọtụtụ ebe n’ụwa taa, ndị mmadụ n’ozuzu ha adịghị enwe mmasị n’ozi ọma nke Alaeze ahụ. Ọbụna ụfọdụ na-ele okpukpe anya ọjọọ.—Matiu 24:12, 14.
N’agbanyeghị nke ahụ, site n’inwe okwukwe na ndidi, ndị nkwusa Alaeze enwewo ihe ịga nke ọma n’imeri ihe ịma aka ahụ, dị ka ahụmahụ na-esonụ nke e si Czech Republic nweta na-egosi.
Ndịàmà abụọ nọ n’èzí gwa otu nwaada nọ n’ime ụlọ e mechiri ọnụ ụzọ ya emechi okwu. Ka obere oge gasịrị, e mepetụrụ ọnụ ụzọ ahụ, otu onye wepụtakwara aka nara magazin Ụlọ Nche na Teta! nke Ndịàmà ahụ nọ na-enye. A nụrụ olu sịrị, “unu emeela,” a kwachiekwa ụzọ ahụ. “Ọ̀ bụ anyị gaghachi?” ka Ndịàmà ahụ nọ na-eche. Otu n’ime ha, bụ́ onye ọsụ ụzọ, ma ọ bụ onye ozi oge nile, kpebiri ịgaghachi, ma otu ihe ahụ mekwara ọzọ, nke a nọgidekwara na-eme ruo otu afọ.
Ebe ọ bụ na onye ọsụ ụzọ ahụ ekpebiwo ịgbanwe ụzọ o si ezi nwaada ahụ ozi ọma, o kpegaara Jehova ekpere maka enyemaka. Mgbe ọzọ o nyere nwanyị ahụ magazin, o ji ihu enyi jụọ ya, sị: “Olee otú i mere? Magazin ndị ahụ hà tọkwara gị ụtọ?” Na mbụ, o nweghị ihe a zara ya, ma mgbe ọ gaghachiri ebe ahụ ugboro ole na ole, nwaada ahụ malitere inwe omume enyi. N’otu oge, o meghere ọnụ ụzọ ya nke ọma, ma mkparịta ụka ahụ dịrị nkenke.
Ebe ọ bụ na nwanyị ahụ enwechaghị mmasị ikwu okwu n’ọnụ ụzọ, onye ọsụ ụzọ ahụ kpebiri idegara ya akwụkwọ ozi iji kọwaara ya ihe mere o ji na-abịa ma jụọ ya ma ọ ga-achọ ka e duziwere ya ọmụmụ Bible. N’ikpeazụ, mgbe onye ọsụ ụzọ ahụ nwesịrị ndidi ruo otu afọ na ọkara, ọ maliteere onye ahụ nwe ụlọ ọmụmụ Bible. Ọ tụrụ ya n’anya ma bụrụ ihe na-agba ume nye ya mgbe nwanyị ahụ gwara ya, sị: “Ekwerewo m na Chineke kemgbe ị malitere iwetara m magazin ndị ahụ.”
N’ezie, ndidi na ịnọgidesi ike n’ihe pụrụ ịrụpụta ihe ndị na-enye obi ụtọ n’ọrụ nkwusa na nke ime ndị na-eso ụzọ.—Matiu 28:19, 20.
NDỊ OGBENYE Na-adawanye Ogbenye
Ịda Ogbenye—Ịchọta Ihe Ngwọta Na-adịgide Adịgide
Jehova, Chineke Nke Eziokwu
Iṅomi Chineke Nke Eziokwu
“Unu Natara n’Efu, Na-enyenụ n’Efu”
Obi Ụtọ Na-adịrị Onye ahụ nke Jehova Bụ Chineke Ya
Ịmụta Nkà nke Iji Akọ Eme ihe
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Ọgọst 1, 2003
Ọgọst 1, 2003
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Ọgọst 1, 2003